Zvimwe zvinowanzoitwa zviwitsi zveMoroccan uye madhiri | Absolut Kufamba
Isabel | 16/04/2021 10:55 | Yakagadziridzwa ku 16/04/2021 11:55 | Morocco
Chimwe chezvinhu zvinonyatsomiririra tsika yenyika igastronomy yayo. Iyo yekuMorocco ine hupfumi hwakawanda hwezvigadzirwa uye nemhando dzakasiyana dzedhishi nekuda kwekuwanda kwekuchinja kwetsika uko nyika yakave nevamwe vanhu munhoroondo yese senge maBerbers, maArabu kana tsika dzeMediterranean.
Iyo, saka, yakanatswa asi yakapusa gastronomy panguva imwe chete, apo musanganiswa wezvinonhuwira uye zvine munyu zvinonaka pamwe nekushandiswa kwezvinonhuwira nemwaka zvinomira.
Asi kana Moroccan gastronomy ichizivikanwa nechimwe chinhu, ndeyezvakanaka zvekuseredza. Kana iwe uchida zvekubika uye uine zino rinotapira, usarasikirwa neinotevera posvo patinoongorora mamwe eanonaka maswiti muMorocco.
1 Ndezvipi zvinoshandiswa zvinoshandiswa mumabheka eMoroccan?
2 Wepamusoro gumi nemasipi eMoroccan
2.3 Nyanga dzemhara
Ndezvipi zvinoshandiswa zvinoshandiswa mumabheka eMoroccan?
Maswiti eMoroccan anogadzirwa zvakanyanya kubva muupfu, semolina, nzungu, huchi, sinamoni uye shuga. Iko kusanganiswa kwezvisanganiswa izvi kwakakonzera mabikirwo anozivikanwa kwazvo akakurumidza kuwanda kutenderera pasirese.
Mukati meakasiyana mabhuku ebhuku pamaswiti eMoroccan kune akawanda madhishi asi kana usati wamboyedza hunyanzvi hwavo, haugone kupotsa izvi zvinonaka.
Wepamusoro gumi nemasipi eMoroccan
Imwe yeanodyiwa nyeredzi eMiddle East chikafu chakayambuka miganhu. Kwayakabva iri muTurkey, asi sezvairi kuwanda kutenderera pasirese, mhando dzakasiyana dzakabuda dzinosanganisira dzakasiyana nzungu.
Yakagadzirwa ne butter, tahini, sinamoni poda, shuga, walnuts uye phyllo hlama. Nhanho yekupedzisira mushure mekubika ndeyekuigeza muuchi kuti uwane dhizeti ine hunhu chaihwo hwekutapira wakasanganiswa neyakaomeswa magadzirirwo ayo anowanikwa nekushandisa nzungu uye filo pastry.
Iyo yekubheka iri nyore kwazvo uye iwe unogona kuigadzira zviri nyore kumba. Kuti ishandire iyo, inofanirwa kudimburwa kuita zvidimbu zvidiki nekuti iri dhizeti isina kuenzana. Kunyangwe isingauyi kubva kuMaghreb, ndeimwe yemaswiti anonyanya kudyiwa muMorocco.
Mufananidzo | Wikipedia neIndiana Younes
Imwe yemasipi anozivikanwa eMoroccan, kunyanya pakati pevana, ndeye Seffa. Iyo idyo inodiwa mundiro munyika iyo ine yayo ine munyu uye inotapira vhezheni. Inowanzoitwa pachiitiko chemasikati akakosha, pakuungana kwemhuri, panoberekwa mwana kana kunyangwe kumichato.
Uye zvakare, zviri nyore kwazvo kugadzirira saka hazvidi kushandisa nguva yakawanda mukicheni. Inogona kutodyiwa sekudya kwekuseni sezvo dhishi iri riine macarhydrate akaomesesa anogadzira simba rinogara kwenguva refu, iro rinopa zvese zvaunoda kuti utarisane nezuva rakareba kubasa.
Kugadzirira iyo inotapira vhezheni yeSefa, zvese zvaunoda kamukoma kana mukaka manoni, ruomba, akachekwa maamondi, icing shuga nesinamoni. Zvisinei, kune vamwewo vanowedzera mazuva, peel yemonimu, chokoreti, mapistachios kana macandi orenji sezvo chiri chikafu chinogona kuchinjaniswa nezvinodiwa zvemhuri nekuwedzera zvimwe zvinoshandiswa.
Seffa ndeimwe yemaswiti ane hutano kuMoroccan sezvo couscous iine yakawanda fiber, yakanakira kuchenesa muviri. Uye zvakare, maamondi ane huwandu hwakawanda hwecalcium. Muchidimbu, chikamu cheSefa isarudzo yakakurudzirwa yekumutsiridza mabhatiri ako nenzira ine hutano uye inonaka.
Mufananidzo | Okdiario
Imwe yemasipi chaiwo eMoroccan ndiwo kabalgazal kana nyanga dzemhara, rudzi rwekunhuhwirira marara akazadzwa nemaarumondi nezvinonhuwira zvine chimiro chinoyeuchidza nyanga dzenyama iyi iyo munyika yeArab inobatanidzwa nerunako uye runako.
Iyi dhizeti inozivikanwa yakakomberedzwa ndeimwe yemaswiti echinyakare eMoroccan uye inowanzo perekedzwa neti pazviitiko zvakakosha.
Kugadzirira kwayo hakuna kuomarara. Mazai, furawa, ruomba, sinamoni, shuga, muto uye orenji svuura zvinoshandiswa pahupfu hwakatsetseka. Kune rimwe divi, maarumondi epasi uye maruva eorenji mvura anoshandiswa kunama mukati memhara dzemhara.
Mufananidzo | Chikafu cheMaroquin
Inozivikanwa se «Moroccan churro», sfenj ndeimwe yemaswiti akajairika eMoroccan, ayo aunogona kuwana mumatare emigwagwa mazhinji mune chero guta munyika.
Nekuda kwechimiro chayo, inofanana nedonut kana dhoni uye inoshumirwa neuchi kana hupfu hwehuga. MaMoroccans anoitora seanotapira, kunyanya pakati pehusiku achiperekedzwa netii inonaka.
Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa kugadzira sfenj mbiriso, munyu, furawa, shuga, mvura inodziya, mafuta uye icing shuga inosaswa pamusoro kushongedza.
Imwe yemidziyo inonaka kwazvo yeAlahuita cuisine mabriwats, zvidyiwa zvidiki zvekudya zvinogona kuzadzwa nepasta ine munyu (tuna, huku, gwayana ...) uye inotapira uye inowanzo kupihwa kumabiko nemafaro.
Mune vhezheni yayo yeshuga, briwats ndeimwe yemaswiti echinyakare eMoroccan. Iri keke diki muchimiro chetriangle uye mukanyiwa waro wakaomarara uri nyore kugadzirira. Kana iri yekuzadza, yekugadzirira kwayo maruva maruva maruva mvura, huchi, sinamoni, maarumondi, ruomba nesinamoni zvinoshandiswa. Kunofadza!
Imwe yemasipi anozivikanwa eMoroccan ndiyo trid, inozivikanwa zvakare se "keke yemurombo." Inowanzo kutorwa pakudya kwekuseni pamwe chete negirazi yeti kana kofi. Zvakareruka asi zvine muto.
Nekuda kwesimba ravo rakakura rekudya, chebakias ndiwo mamwe eanonaka maswiti eMoroccan yekutsanya muRamadan. Ivo vakakurumbira zvekuti zvakajairika kuzviwana mune chero musika kana chitoro chekupheka munyika uye nzira yakanak yekuzviravira ine kofi kana mint tii.
Izvo zvinogadzirwa neupfu hwegorosi mukanyiwa uyo unogadzirwa kuti uite fry uye unoshanda mune dzakapetwa mitsetse. Kubata kwepakutanga kwechebakias kunopihwa nezvinonhuwira zvinoshandiswa kwazviri, senge safroni, orenji rinotumbuka essence, sinamoni kana pasi anise. Pekupedzisira, dhizeti iyi ine huchi uye inodururwa nesame kana mbeu yesame. Iyo inofadza kune avo vanoda madhizeti ane hwakanyanya hwema.
Mufananidzo | Vganish
Iyi ndeimwe yeasinga gadzirisike cheesy Moroccan sweets. Inotsemuka kunze uye ine muto mukati, ichi chinonaka chikafu cheMiddle East chakagadzirwa nevhudzi rebvudzi, kujekesa bota uye akawi chizi mukati.
Kana yangobikwa, iyo kanafeh inodonhedzwa nesirasi yemvura-inonhuhwirira uye inosaswa nema walnuts akapwanyika, maamondi kana pistachios. Iyi dhizeti inonaka inonaka ndeyekurapa chaiko uye inokuendesa kuMiddle East kubva pakurumwa kwekutanga. Inotorwa kunyanya mumazororo eRamadan.
Mufananidzo | Wikipedia naMourad Ben Abdallah
Kunyangwe kwaakatangira kuri muAlgeria, makrud rave rimwe remaswiti anozivikanwa eMoroccan uye rakajairika muTetouan neOujda.
Inozivikanwa nekuve nedhaimani chimiro uye mukanyiwa wayo unogadzirwa negorosi semolina, iyo yakagochwa mushure mekuzadzwa nemadate, maonde kana maarumondi. Kubata kwekupedzisira kunopihwa nekugeza makrud muuchi uye orenji rinotumbuka mvura. Zvinonaka!
Mufananidzo | Craftlog
Imwe yemaswiti eMoroccan anoshandiswa mumarudzi ese emapati ndiwo mafaqqas. Aya makeke anotsemuka uye akaomeswa anogadzirwa neupfu, mbiriso, mazai, maarumondi, maruva orenji mvura neshuga. Vanogona kudyiwa vega kana nekuwedzera mazambiringa akaomeswa, nzungu, anise kana mhodzi dzeesame kuhupfu.
Iyo feqqas inoratidzirwa nekunaka kwavo kwakapfava kwakakodzera kune ese marati. MuFez itsika yekushandira zvidimbu zve feqqas nembiya yemukaka sakuseni kwevana. Kune vanhu vakuru, chinonyanya kuperekedza iti inodziya kwazvo yemindi. Iwe haugone kuyedza imwe chete!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Masipire akajairika eMoroccan uye madhiri